NBUDATA IHE OMUMA NKE INTERNET EXPLORER - MMEMME NYOCHA - 2019
Internet Explorer (IE) 11 - Nke a bụ njedebe ikpeazụ nke ihe nchọgharị ahụ wuru maka Windows. Nke a na ihe nchọgharị nke IE dị mma karịa nsụgharị mbụ nke ngwanrọ a, n'ihi ya, i kwesịrị ileru anya na ihe nchọgharị a ma ghọta uru na ọghọm ya niile.
IE 11 bụ ihe nchọgharị weebụ nke dị ugbu a na-akwado ọtụtụ ụkpụrụ na teknụzụ ọhụrụ. Ọ maara otú e si arụ ọrụ na taabụ Ịntanetị, igbochi mmapụta na-achọghị na ọtụtụ ndị ọzọ. Mkparịta ụka na-esonụ na-elekwasị anya na atụmatụ ọhụrụ nke nchọgharị a.
Ebe nchekwa na desktọọpụ gị
IE nke a nwere ike ijikọta weebụsaịtị ọ bụla na Windows desktọọpụ. Ntugharị a dị nnọọ mfe, ebe ọ na-enye gị ohere imeghe ọtụtụ ihe eji eme ihe n'Ịntanet na windo nchọgharị ọhụrụ na naanị otu pịa na ọrụ ọrụ ahụ.
Ngwaọrụ Mmemme Weebụ
Ihe a ga-adọrọ mmasị ndị na-eme mmemme nke ibe weebụ. Internet Explorer 11 na-enye ndị ọrụ mmepụta ihe F12 dị mma, gụnyere atụmatụ ọhụrụ maka idozi njikwa nchịkọta ọrụ, njikwa, na ezigbo nbube, emulator, ngwá ọrụ nchekwa ihe nchekwa, na ngwaọrụ iji chọpụta ọsọ nke nzaghachi onye ọrụ.
IE 11 na-enye gị ohere iwelie nzuzo site na iji ọrụ "Esochina", nke na-egbochi ndị na-eweta ọdịnaya ndị ọzọ na saịtị ndị na-eleta na ozi gbasara data ezigara na ibe weebụ a. Nke ahụ bụ, ọ, n'ụzọ dị nnọọ mfe, na-egbochi ọdịnaya nke ndị na-enye ndị ọzọ.
Ịchọpụta na Ịntanetị Internet Explorer 11 na ọnọdụ nkwalite na-ewepu nsogbu nke na-egosi na saịtị weebụ na-ezighị ezi, dịka ọmụmaatụ, ihe oyiyi onyinyo, ederede ederede na-enweghị usoro, na ihe ndị yiri ya.
SmartScreen Filter na-adọ aka ná ntị onye ọrụ banyere nbudata faịlụ ndị nwere ike ịdaba na Ịntanetị. Ọ na-enyocha faịlụ maka ọnụ ọgụgụ downloads, ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ downloads nke faịlụ a abụghị nnukwu, mgbe ahụ ọ ga-adọ gị aka ná ntị banyere ohere nke iyi egwu. Ntucha na nyochaa saịtị, wee jikọta ha na ndepụta nke saịtị phishing na, ọ bụrụ na a chọtara mappings ndị dị otú a, a ga-egbochi ihe nchọgharị weebụ.
Uru nke Internet Explorer:
Enweghị ike iji
Ezigbo nchịkọta HTML
Na-arụ ọrụ na JavaScrip
Web Cryptography API nkwado
Nkwado SPDY (usoro maka mbufe ọdịnaya weebụ)
Ọghọm dị na Internet Explorer:
Usoro nkwụsị nke njikwa ihe nchọgharị
N'ikpeazụ, Internet Explorer 11 bụ ihe nchọgharị na interface dị mma, dị mfe iji, yabụ ị ga-ebudata Internet Explorer n'efu na ụdị ọhụrụ a ma jiri aka ha nyochaa atụmatụ ọhụrụ nke ihe nchọgharị weebụ a.
Download Internet Explorer n'efu
Esi kpochapụ kuki na nchọgharị Internet Explorer Otu esi echeta paswọọdụ na Internet Explorer Adblock Plus nkwụnye maka Internet Explorer Kwado kuki na Internet Explorer
Internet Explorer bụ ihe nchọgharị Microsoft zuru ezu jikọtara n'ime nsụgharị Windows niile. Ọ dị mfe iji, nwere interface dị mfe na nke na-enweghị mgbagwoju anya, adịghị ebute usoro ahụ.
Udi: Nchọgharị Windows
Onye Mmepụta: Microsoft Corporation